Immisa qof ayaa ku jiri doona baska yar ee Trabzon? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Banaadir61 TrabzonImmisa qof ayaa ku jiri doona baska yar ee Trabzon?
12 / 11 / 2019 61 Trabzon, GUUD, Gobolka Banaadir, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Immisa qof ayaa ka buuxsami doona gacanta
Immisa Qof Ayaa Lagu Wadaagi Doon doonaa Trabzon ?; Kulankii ugu horreeyay ee Dawladda Hoose ee Magaalada Trabzon bishii Nofeembar waxaa lagu qabtay xilka gudoomiyaha Duqa Magaalada Metrobtpolitan Murat Zorluoğlu.
Gudaha magaalada, nidaamka minibus-ka ee magaalada gudahiisa ayaa mar kale soo kacay. Wadahadalada ayaa socda oo loogu talagalay bedelida buuxda ee nidaamka dolmush, halka nidaamka cusub loo qorsheeyay in la meel mariyo bisha Juun ee 2020.
Zorluoğlu wuxuu yiri: muş Laga bilaabo Juun ee sanadka 2020, minibileyadu waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwa ku habboon naafada oo aad u deggan gaar ahaan hawo qaboojinta. Midkoodna gawaarida hadda loo isticmaalo sidii bas yar ayaan sharci ahaan heli doonin bisha Juun 2020. Sidaa darteed, casriyeyntooda waxaa faraya sharciga. Waxaan xiriir dhow la sameynay Xiriirkeena Wadayaasha tan iyo bilowgii. Dhowr jeer ayaan la kulannay oo keliya ma ahan Ururkayaga Wada-shaqeynta, laakiin waxaan sidoo kale la kulannay dhammaan madaxda rugtayada oo aan wadatashi wada jir ah la sameynay. Waxaannu ku soo qaadnay howshan ilaa hadda iyadoo caqligal ah la tashi buuxa. Hadafkayaga ugu weyn ee halkan waa inaan ka faa'iideysano dadkeenna. Si kale haddii loo dhigo, waxaan ka shaqeynay faham ka sii raaxeysashada dolmism. Tan kale, waxaan jecelahay in aan si farxad leh u sheego in Ururkayaga Chauffeurs iyo madaxweynaheena istaatikada ay gacmahooda ku hoos dhigeen dhagaxa. Waan u mahad celinayaa.
Waxaa jiray saddex beddelaad. Mid ka mid ah ayaa ah in basaska jira ee hadda jira ay sii wadi doonaan cusbooneysiinta iyada oo tirada kuraasta la heli karo iyadoon wax kuraas ah lagu kordhin. Si kale haddii loo dhigo, adoo kordhinaya moodooyinka gawaarida, oo ka dhigaya kuwo ku habboon naafada, kordhinta raaxada nidaamka si ay u sii socdaan. Xulashada labaad waa in la kordhiyo tirada kuraasta 16 + 1 iyo in la yareeyo tirada gawaarida lana kordhiyo tirada wada-hawlgalayaasha 3.
Sidaad ogtahay, dolmuş kasta oo ku yaal Trabzon wuxuu leeyahay laba iskaashato. Soojeedinta seddexaad ayaa ah in la kordhiyo tirada kuraasta ka sarreysa 17 si loo kordhiyo tirada basaska loo qaado heerka basaska dadweynaha iyo in loo fidiyo adeegga baska yar. Usbuucyada soo socda, waxaan awood u yeelan doonnaa in aan u sharraxno xulashooyinka dhammaan isuduwayaashayada iyada oo laga helayo faa'iidooyinkooda iyo faa'iido darrooyinkooda. Mararka qaar waxaa jira warbaahinno ka soo baxa saxaafadda in ganacsigan uu isu beddelay Tangle. Ma aha in la ixtiraamo. Hawluhu waxay ku sii socdaan isuduwiddayada. Waxaa la siiyay in dadkayagu ay helaan adeeg bas yar oo ka wanaagsan, habkii darawalka ee xulashooyinkan ayaa muhiim noo ah Markii ay iyagu go'aankan gaarayaan, waxaan si diiran u eegi doonnaa go'aannadooda haddii ay dammaanad qaadaan raaxada dadkeenna.
Wadada Xawaaraha Sare ee Trabzon Erzincan
Gondola iyo Cabins 10
Ururka Wadayaasha Gawaarida Trabzon
Nidaamka Trabzon Dolmuş
Imisa qof ayaa ku jiri doona baska yar ee Trabzon